7 nhau dzaFebruary dzese marudzi | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fantasy, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Nyaya
Zviri pano February zvakare. Mwedzi mupfupi wegore wakazara nhau nekuti nyika yekutsikisa haina kumira. Kune akawanda, uye iwe unofanirwa kugara uchisarudza pakati pawo. Ava ndivo vangu vatanhatu vakasarudzwa, emhando dzese uye ezvese zvido: kutanga, izvo zve Ashley audrain, uye mamwe mazita epasirese akasimbiswa akadai se Joe Hill o Joe abercrombie. Kana nyika dzekumusha kwe Manuel Jabois, Susana Rodríguez Lezaun y Toni Chikomo.
2 Pasi peganda - Susana Rodríguez Lezaun
5 Vhura Guva - Joe Chikomo
6 Teresa Lanza's Rima Raki - Toni Chikomo
7 Dambudziko rerunyararo - Joe Abercrombie
Ndiyo kechipiri rondedzero yemunyori wenhau uye munyori Manuel Jabois mushure Malaherba, iyo yatove yakabudirira kwazvo. Uye anotiudza zvinoshamisa kunyangarika kwemusikana panguva yemuchato waamai vake mutaundi diki mu Galician Coast yeRufu. Nyeredzi Berta, mutori wenhau anouya panzvimbo ku ferefeta nyaya yacho Makore makumi maviri nemashanu gare gare. Iko kune kwakajairwa diki nharaunda uko munhu wese anofunga kuti vanoziva zvese uye pakupedzisira munhu wese anovigawo chimwe chinhu.
Pasi peganda - Susana Rodríguez Lezaun
Gore rakapera ndakaita rombo rakanaka ku sangana titaure naSusana, kunyangwe dai zvaive zviripo. Ikoko akatotiudza chimwe chinhu nezve ino nyowani nyowani, a thriller mutsinga yemazita ake ekare maanotizivisa iye kune asinganzwisisike muongorori achitanga nezita rake, Marcela Pieldelobo.
Es muongorori weNational Police Corps muPamplona uye kazhinji dudzira mirairo nenzira yako, sekuita basa rako. Mune ino nyaya, kwaanofanira kutarisana nezvake zvakapfuura, muchimiro che baba vanotuka anoonekazve mushure mekufa kwamai vake, muongorori anosarudza kutarisisa nyaya ye mucheche akasiyiwa Mune yakaputsika mota yekuroja isina kana trace yemutyairi, asi neropa uye nemavhiri. Kune izvi iwe uchave nerubatsiro rwewaunogara Mutevedzeri Inspector Miguel Bonachera.
Es rimwe remabhuku anotarisirwa kwazvo yegore rino uye ichaburitswa munyika dzinopfuura makumi matatu. Zviri nezve thriller zvepfungwa nezvaamai, mwanasikana uye chisungo chavo chakaoma. Iyo inotora iyo zvinyorwa zvinyorwa naAshley Audrain, munyori weCanada akazvarwa mu1982, uyo akatogamuchira ratidziro dzeshungu.
Nyeredzi Blythe, iwe wasvika padanho muhupenyu hwako kwaunoshamisika kana uchinyatso kurarama hupenyu hunofadza hwawagara uchida, nemurume akakwana uye nemwanasikana wengirozi. Kana kuti ari kudzokorora nyaya yakashata yaamai vake naambuya, yakaratidzirwa nekushungurudzwa. Iwe zvakare unotanga kusava nechokwadi pamusoro pekuti gava, murume wakeNdiye iye akakodzera shamwari nababa, kana ane hupenyu hwakafanana hunomutora kuenda kure kure nemusha mazuva ese. Kana iri yako mwanasikana Violet, Ndiye zvimwe musikana anopenya uye akaoma anongotsvaga kutariswa kubva kwaari, kana iye akaipa kubva pakuzvarwa?
Waive yakasarudzwa Chemhondoro imwe yemanoveli akanakisa egore rapfuura uye zvino zvasvika pakududzirwa. Iyo inhau yechisere yemunyori uye yakafuridzirwa ne hupenyu uye kufa kwemwanakomana wega waWilliam Shakespeare. Izvo zvinoitika muna 1596 uye zvinotaurira nyaya yemukadzi waShakespeare, Agnes Hathaway, wemwanakomana wavo akarasika, wemuchato unounzwa kumucheto kwekusuwa uye simba guru rekugadzira.
Kuvhura guva - Joe Chikomo
Paari munzira yekuve akakura semunyori sababa vake Stephen King, anodzoka Joe Chikomo. Uye anozviita ne new kuunganidzwa kwenyaya (maviri akanyorwa pamwe chete naye), kwaanosimudzira kukakavara kwevanhu zvikuru muzvirongwa zvinonakidza.
Semuenzaniso, isu tine Gateway iyo inotarisisa nyika izere nezvishamiso inoshanduka yeropa kana boka revavhimi rikapfuura napo. KANA vakoma vaviri vanopinda mumunda we labyrinthine wehuswa hurefu kuti vabatsire mwana anoshevedza kubatsirwa pasi pegwenzi. Kana a mutyairi welori uyo anobatwa mukumhanyisa kudzingirira kuburikidza negwenga reNevada. Kare vana vechidiki Ivo vanokwira yekare carousel uko kwese kutendeuka kune zvinotyisa mhedzisiro. Zvakare kune anozvibata ndiani anofamba seri kwevhiri kutora kuverenga kune vakafa. KANA shamwari mbiri vanowana chitunha che plesiosaur pamhenderekedzo yegungwa.
Rima rekuonekana kwaTeresa Lanza - Chikomo cheToni
Toni Chikomo inodzoka zvakare nenyaya iyi inotaura zvakaitika mushure meiyo kufa kwevechidiki Honduran anonzi Teresa Lanza, uyo akasvetukira munzvimbo isina chinhu kubva pahwindo. Gore rakapera uye zvakadaro hapana anogona kutsanangura kuti akazviitirei. Rimwe zuva, pamusuwo edzimba dzakacheneswa naTeresa, dzimwe maposta nemufananidzo wake, muchinjikwa mutema uye a shoko: «NDIANI AKAURAYA TERESA LANZA?».
Kubva ipapo hupenyu hweshamwari shanu nemhuri dzavo havazombove zvakafanana zvakare. Vakapa dzimba dzavo kuna Teresa, asi ikozvino ndangariro yake yave tyisidziro inogona kuburitsa mamwe zvakavanzika zvavanosarudza kuti zvirege kuwanikwa.
Dambudziko rerunyararo - Joe Abercrombie
Mumwe wevanyori vanozivikanwa kwazvo weanofungidzira genre, Abercrombie inopa izvi kuendeswa kwechipiri kubva ku trilogy ye Zera rekupenga, ane zita rekutanga Ruvengo rudiki. Tora maavatata evatambi anogara mudenderedzwa reNyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » 7 kuburitswa kutsva kwaFebruary kwese marudzi
Ini ndinofunga ndicharerekera ku "Vhura Guva" naJoe Hill. Ndapedza kuverenga Nyanga uye zvaiita sezvisingadaviriki kwandiri saka ndinoda kuziva zvakawanda nezvebasa rake.